Myanmar 18 Plus: ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့
================ည(၅)နာရီလောက်မှာ ဆိုင်ပိတ်ပြီး ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်...မင်းထက်ဖွင့်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေး၊ ဖုန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်လေးကလည်း အခုအချိန်မှာတော့ ဒီမြို့လေးမှာ ယှဉ်နိုင်သူမရှိအောင် အောင်မြင်နေဆဲပါပဲ...ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာကနေ..အိမ်ကိုပြန်ဖို့က တစ်မိုင်ခွဲလမ်းလျှောက်ရပါတယ်..ဆိုင်ကယ်ရှိပေမဲ့မစီးချင်တာရယ်..ကျန်းမာရေးအရရယ်..ပြီးတော့ညအချိန်မှာ လမ်းလျှောက်ရတဲ့အရသာရယ်ကို ကြိုက်တာကြောင့်...သူနေ့တိုင်းဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်နေတာပါ...ကိုမင်းထက်.ပြန်.ပြီလား.....ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ...လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတိုင်းကလည်းကျွန်တော့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်....ခင်ခင်မင်မင်နေတတ်တဲ့သူ့ကို လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတိုင်းကနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်...မင်းထက်အိမ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်...လမ်းမှာရပ်ကွက်ကရေထုတ်မြောင်းကြီးကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ရပါတယ်...တံတားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်..အဲ့တံတားလေးဘေးမှာ
ခုံတန်းလေးတွေရိုက်ထားပြီး...ည(၁၀)နာရီကျော်ရင် ရပ်ကွက်ထဲကကောင်လေးတွေစုပြီး ဂစ်တာလာတီးကြပါတယ်.....
စီးကရက်ဘူးကို ထုတ်ပြီးတစ်လိပ်ကိုထုတ်သောက်လိုက်ပါတယ်...ဒီလိုစီးကရက်သောက်ရင်း ပျင်းသလိုလိုရှိလာတာနဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်ပါတယ်....ဒို့ငေးကြည့်စဉ်ကောင်းကင်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီသက်တန့်လေး ရောင်စုံခြယ်လှပလွန်းလိုက်တာ..ဒို့နှစ်ယောက်အချစ်လိုပဲကွာ...ညနေမှာမျှောလွင့်လို့နေရင်ခုန်သံလေးများစွာ...ဘယ်အချိန်မှပြန်ဆုံနိုင်မယ်မသိတော့ပါ..နေရစ်ခဲ့ရာဇ၀င်ထဲမှာ...နေရစ်ခဲ့ပြုံပြင်ဟောင်းပမာ..နောက်ဆုံးသော အိမ်မက်တွေရယ်..စိတ်ကူးတွေရယ်..သီချင်းလေးကို နားထောင်ရင်း ကျွန်တော့် လွမ်းသလိုလိုဆွေးသလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်...ထိုအချိန်မှာ တံတားပေါ်ကနေ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြတ်လာပါတယ်...KBZ ဘဏ်ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ သူလည်းအမှတ်မထင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့....ကောင်မလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရင်တွေအရမ်းကို လှုပ်ရှားသွားပါတယ်.....မိုး...သူ့နှုတ်ခမ်းကနေခပ်ဖွဖွလေးထွက်သွားပေမဲ့သူချက်ချင်းပြန်သတိဝင်လာပါတယ်....ဒါမိုးမှမဟုတ်တာ...မိုးရဲ့အမအကြီးဆုံးကမွေးတဲ့..သမီး
ယုယပဲ...မိုးကဆုံးသွားတာကြာပြီ..(၈)နှစ်လောက်တောင်ရှိတော့မယ်. မိုးနဲ့တော်တော်တူတယ်....မိုးရှိရင်အခုအချိန်ဆို(၂၈)လောက်ရှိတော့မယ်....မိုးတူမတောင်(၂၀)လောက်ရှိနေပြီကိုး....ဦးမင်းထက်ကြီး...တစ်ယောက်ထဲလား...ဟုတ်တယ်ကလေးရေ.....ကောင်မလေးကသူ့ကိုပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်....ဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်တာလား..သူစကားမရှိစကားရှာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်....ဟုတ်တယ်ဦးရဲ့ သမီး (၂)လလောက်ပဲရှိသေးတယ်....ယုယလည်းဦးမင်းထက်ကြီးကို လှမ်းနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်..တကယ်တော့ဦးမင်းထက်အိမ်နဲ့ ယုယအိမ်နဲ့က တစ်လမ်းတည်းပါ...ဒါပေမဲ့
ဦးမင်းထက်ကဖော်ဖော်ရွေရွအားလုံးကို ခင်တတ်ပေမဲ့ သူမတို့မိသားစုနှင့်တော့တစိမ်းလိုဖြစ်နေကြသည်.အခေါ်အပြောရှိတာကို သူမသိတတ်သောအရွယ်ကတည်းကမမြင်မိပေ..ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ..ဦးမင်းထက်ကိုမြင်လျှင်စကားကစစချင်နေသည်.....မင်းထက်လည်းထိုင်ခုံမှာ စီးကရက်ကိုဖွာရင်း ဆက်ထိုင်နေမိသည်.....ယုယသည်သူ့အဒေါ်မိုးမြတ်နွယ်နှင့်တူလှသည်....ယုယဆိုသော
ကောင်မလေးနှင့်စကားပြောမိမှပင်..သူ့စိတ်တွေက လွန်ခဲ့သော(၈)နှစ်ခန့်ဆီသို့ လွှင့်မျှောသွားတော့သည်.....
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းများထွက်ခဲ့ပြီ မင်းထက်တစ်ယောက်အမှတ်ကောင်းခဲ့သော်လည်း အိမ်မှာက အဖေကလည်းသူဆယ်တန်းတက်သည့်နှစ်မှာဆုံးအမေကလည်း..ချူချာဆိုတော့သူ...ကျောင်းဆက်မတက်ဖြစ်ခဲ့... ဒါနဲ့သူပွဲရုံတစ်ခုမှာနေ့စားအလုပ်သမားဖြစ်လုပ်နေချိန်ပေါ့...မိုးမြတ်နွယ်က(၁၀)တန်းတက်တုန်းကသူနဲ့အခန်းမတူပါဘူး..သိပ်လည်းမခင်ပါဘူး...ဒီလိုနဲ့သူလည်းအလုပ်လုပ်ရင်းအဝေးသင်ဆက်တက်ပါတယ်..သူအဝေးသင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးမြတ်နွယ်က Day တက်ပြီး ကျောင်းပိတ်လို့ပြန်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ မတွေ့ဖြစ်ကြပါဘူး....တစ်နေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံဖို့အကြောင်းကဖန်လာပါတယ်....မင်းထက်ဟာအဝေးသင်ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ..မိုးမြတ်နွယ်ကလည်း Day ကနေကျောင်းပြီးဘွဲ့ရတော့ ကျောင်းဆရာမလုပ်နေပါတယ်...တစ်နေ့သူပွဲရုံကနေည(၈)နာရီလောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ
(A) ခန်းက ကိုမင်းထက်မဟုတ်လား.....သူ့နားမှာလာရပ်တဲ့အရိပ်ကလေးတစ်ခုကြောင့်သူလှည့်ကြည်မိလိုက်ပါတယ်.
စီးထားသည်..မျက်နှာလေးကလည်းသနပ်ခါးလေးသာလိမ်းထားသော်လည်းဖြူဝင်းမွတ်နေသေည်...ခါးကသိမ်သိမ်လေးဖြစ်သဖြင့်..နောက်မှကြည့်ပါကစွင့်ကားသော တင်ပါးများကိုမြင်ရသည်.....မဟာဆန်သော အလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဟုဆိုရပေမည်...xxxxxxxxxxxxxxxxxသို့နှင့်မိုးမြတ်နွယ်နှင့်သူသည်ထိုတံတားလေးတွင်နေ့တိုင်းတွေ့ဖြစ်သည်....မိုးမြတ်နွယ်ကို
သူကဆွေမရှိမျိုးမရှိတစ်ကောင်ကြွက်ဆိုတော့ မိုးမြတ်နွယ်ကိုသူဖွင့်မပြောရဲခဲ့...မိုးမြတ်နွယ်ကို မဆင်းရဲစေချင်တာလည်းပါသည်....အခုတစ်လောမိုးမြတ်နွယ်မျက်နှာသိပ်မကောင်း....သူနှင့်တွေ့တိုင်းခါတိုင်းကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားတွေပြောပေမဲ့..
.အခုတစ်လောတိတ်ဆိတ်နေတတ်သည်...ဒီလိုနှင့် လသာနေသောညတစ်ညတွင် မိုးမြတ်နွယ်ကားလာနေကျတံတားဆီကိုရောက်မလာ...မိုးမြတ်နွယ်ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်လို့သူတွေးနေမိသည်..ဒီလိုနဲ့ည(၉)နာရီလောက်တွင်
မိုးမြတ်နွယ်က နှစ်ယောက်ဖြစ်သော .မြတ်မြတ်၊သီတာတို့နှင့်အတူမြို့ထဲမှကားဖြင့်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရ၏..တံတားနားရောက်သော်ကားထဲတွင်သူ့အမနှစ်ယောက်ကို
ဘာပြောမှန်းမသိ...မိုးမြတ်နွယ်ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီးသူ့ဆီလျှောက်လာတာကိုတွေ့ရသည်...ကိုမင်းထက်ရောက်နေတာကြာပြီလားဟင်.ဟုတ်ကျွန်တော်တော် မိုးဘာဖြစ်နေတာလဲလို့တွေးနေမိတာ..မိုးမြတ်နွယ်ကား..တံတားဘောင်များကိုကိုင်ရင်း ကိုမင်းထက်ရယ်...မိုးလေအခုတစ်လောသိပ်စိတ်ဆင်းရဲတာပဲ...ကျွန်မမိဘတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ပါတယ်...ဘာဖြစ်လို့လည်းမိုးရဲ့..ကိုမင်းထက်ကိုစိတ်မဆင်းရဲစေချင်ပါဘူး...မိုးက.... မိုးကိုသီချင်းဆိုပြပါလားဟင်...မိုးနားထောင်ဖူးချင်လို့ပါ...ဘာသီချင်းနားထောင်ချင်လည်းမိုးရဲ့... Lလွန်းဝါဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချစ်ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဆိုပြပါလား....မိုးနားထောင်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဆိုပြပါ့မယ်..ပြောပြချင်တယ်ချစ်စကားတွေ..ထာဝရသိမ်းထားရမယ်လေ..တို့နှစ်ယောက်အချစ်တွေ ကံကြမ္မာကိုပဲအပြစ်ဖွဲ့ရမလားလေ...ရင်မှာမင်းမျက်ရည်..နာကျင်ဆဲပဲလေ..သံသရာရှည်မဲ့..ဒဏ်ရာတွေနဲ့နာကျင်စွာလျှောက်လှမ်းရတော့မလေ...လျှို့ဝှက်ချစ်ရေ....ကိုမင်းသီချင်းဆိုတာသိပ်ကောင်းတာပဲနော်....သူ့ကိုကိုမင်းလို့ခေါ်တာသတိထားမိသည်...ကိုမင်း..မိုးကိုတစ်ခုခုပြောစရာများရှိနေလားဟင်..မရှိပါဘူးမိုးရယ်...မိုးမြတ်နွယ်မျက်နှာကားသူ့ကိုတစ်ခုခုပြောစေချင်ပုံပင်ဒါဆိုလဲ မိုးပြန်တော့မယ်နော်ကိုမင်း....မိုးကိုချစ်တယ်လို့ပြောမယ်လုပ်ပြီးမှသူမပြောဖြစ်ခဲ့.....ထိုညကသူတော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်ခဲ့...နောက်နေ့သူပွဲရုံမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်...ကိုမင်းရှေ့မှာဧည့်သည်လာတယ်...အရေးကြီးလို့....မသီတာဆိုလားဘဲ...မိုးမြတ်နွယ်အမအကြီးဆုံးမသီတာ...မသီတာ...ဘာများရှိလို့လည်း...မသီတာကားငိုထားဟန်တူသည်.... မောင်မင်းထက် မင်းလိုက်နိုင်ရင်လိုက်ခဲ့ပါကွယ်..အမတို့အိမ်ကို ။အမညီမလေး မိုးမြတ်နွယ်..နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီ...မင်းကိုခေါ်ပေးပါဆိုလို့...အီးဟီးဟီးမသီတာကားငိုချေပြီ...မင်းထက်ရင်ထဲတဒိုင်းဒိုင်းဖြစ်သွားသည်..ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလည်းဗျာ...အိမ်ကိုအရင်လိုက်ခဲ့ပါမောင်မင်းထက်ရယ်....xxxxxxxxxxxxxxxxxဖြူလျော့ပြီးသွေးဆုပ်နေသော မိုးမြတ်နွယ်ကား ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အနေအထားလေး....ချစ်ရတဲ့မိုးရယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်..အိပ်ဆေးတွေအလွန်အကျွံသောက်လိုက်သည်ဟုသိရသည်....မိုးကားသူ့ကိုတစ်ခုခုပြောချင်ဟန်သူသည်...မိုးနားကို..သူကပ်သွားတော့...မောင်...မောင့်ကိုမိုးချစ်တယ်....မိုးဇက်လည်ကျသွားသည်....မင်းထက် မိုးမြတ်နွယ်အိမ်မှ ပြန်ခဲ့တော့ သူ့အိမ်မှာ တစ်နေကုန်ကြိတ်ငိုခဲ့သည်..နံရံတွေကို လက်သီးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးခဲ့သည်...မိုးရယ်...ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ...ဒီလိုမှန်းသိရင်လေ...
ယုယနွယ်ကား သူမအိမ်သို့ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အိမ်ခန်းထဲသို့တန်းဝင်သွားသည်..ဒီအခန်းကား ယုယနွယ်ဒေါ်လေး မိုးမြတ်နွယ်နေခဲ့သော အခန်းဖြစ်သည်.ဒီနေ့ကိုကြိးမင်းထက်ကသူ့ကို စကားပြောတယ်လေ....သူမစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေသည်...ဒေါ်လေးမိုးမြတ်နွယ်ရဲ့ပုံကား အခန်းထဲကစားပွဲပေါ်မှာ...ဒေါ်လေးကားဓါတ်ပုံထဲမှာပြုံးနေသည်...ဒေါ်လေးမိုးမြတ်နွယ်နှင့်သူမကိုသိပ်တူသည်ဆိုပြီး အဖိုးအဖွားတွေကအရမ်းချစ်ကြသည်...ဒါကြောင့်
ဒေါ်လေးဆုံးကတည်းကပိတ်ထားသော အခန်းကိုအဖိုးအဖွားများက မြေးတွေအများကြီးရှိသည့်အနက်...သူမကိုသာအပိုင်စားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်...သူမအခန်းထဲနေတော့ အခန်းတွေကိုရှင်းရင်း ဒေါ်လေးရဲ့ဒိုင်ယာရီကို သူမတွေ့ခဲ့သည်...ဒေါ်လေးအိပ်ဆေးတွေအလွန်အကျွံသောက်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည့် ညကရက်စွဲနှင့်ရေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ဖို့များတယ်...မောင်ရယ်...ကျွန်မကိုဘာလို့ဖွင့်မပြောတာလဲ..မောင်အရမ်းပျော့ညံ့တာပဲ..ကျွန်မကမိန်းမသားလေ..မောင်ဖွင့်ပြောမှ ကျွန်မကလေ....အခုတော့ကျွန်မက မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို အိမ်ကပေးစားလို့ယူရတော့မယ်...မောင်ဒါတွေကိုမသိပါဘူး....မနက်ဖြန်ဆိုစေ့စပ်ကြတော့မယ်....ပြိးရင်ကျွန်မချစ်တဲ့မောင်နဲ့ဝေးတဲ့အရပ်ကိုလိုက်သွားရတော့မယ်...မောင်နဲ့ကလည်းချစ်သူတွေမဟုတ်တော့..ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...ဒီတော့မောင်နဲ့တော့ရှင်ရက်နဲ့မကွဲနိုင်ဘူး...ကျွန်မလေ...xxxxxဒိုင်ယာရီလေးထဲမှစာကြောင်းလေးများကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ယုယနွယ်...ဒေါ်လေးကိုသနားမိသည်...ဒါကြောင့်နေမယ်ကိုကြီးမင်းထက်ဟာ ရပ်ကွက်ထဲကကောင်မလေးတွေနဲ့အရောတ၀င်မနေတာ....ခုချိန်မှာတော့ကိုကြီးမင်းထက်ကပိုက်ဆံရှိနေပြီ..လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်လောက်ကထီပေါက်ပြီး..ထိုမှစပြီး ထိုရင်းနှီးငွေဖြင့် မြို့ထဲမှာ ဖုန်းအရောင်းဆိုင် / ကုန်တိုက်(၄)ခုလောက်ပိုင်နေပြီ...ဘယ်ကောင်မလေးကိုမှစိတ်မ၀င်စား....ဒေါ်လေးရေဒေါ်လေးလိုပဲသမီးလည်းကိုကြီးမင်းထက်ကို ချစ်တယ်သိလား......စားပွဲပေါ်မှ ဒေါ်လေးဓါတ်ပုံကို ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီး.ယုယနွယ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်.....သူမရင်ထဲမှာတော့ မင်းထက်နှင့်ညနေကတံတားပေါ်မှာ စကားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို တွေးပြီး ရှက်သွေးလေးများပင်ဖြာလာတော့သည်
ယုယနွယ်ကား နောက်နေ့မှစကာ သူမဘဏ်မှရုံးဆင်းချိန်တွင် မင်းထက်လာရာလမ်းမှာ လမ်းချင်းတိုက်တာလိုလိုနှင့် မင်းထက်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး အတူတူ လမ်းလျှောက်ပြန်သည်....မင်းထက်ကိုရင်းနှီးသထက်ရင်းနှီးအောင် စကားများပြောလေ့ရှိတယ်....မင်းထက်အဖို့လဲမိုးနှင့်တူသော တူမ၏တူမလေးကို ခင်တွယ်နေမိသည်...သူကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းမို့ မသိပေမဲ့ ယုယနွယ်ကတော့သူမသူငယ်ချင်းများကို သူ့ရဲ့ဘဲဟု နောက်ကွယ်တွင်ပြောထားတာကိုသူမသိ....တစ်နေ့မင်းထက်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်း....သူမကကျောက်ခဲတစ်လုံးကိုတမင်သက်သက်ကို ခလုပ်တိုက်ပြီး ခြေခေါက်လဲချလိုက်ပါတယ်...အို...အမေ့...သူမရဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းမှုကြောင့်မင်းထက်ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားပါတယ်..ဘာဖြစ်သွားလဲကလေး....မျက်နှာလေးရှုံ့ပြီး ခြေထောက်ကိုဆုပ်နယ်နေတဲ့ယုယကိုသူစိတ်ပူသွားပါတယ်..ယုယကတော့ခြေထောက်ကိုအုပ်လျက်ပါပဲ...ရတယ်ကိုကြီး..ယုယ မတ်တပ်ထကြည့်ဦးမယ်...အို..အအ...ခြေထောက်မထနိုင်သလိုဟန်ဆောင်ပြီး အနားမှာရှိနေတဲ့ ကိုကြီးမင်းထင်ရင်ခွင်ထဲကို ယိုင်လှဲချလိုက်ပါတယ်...မင်းထက်လဲ ယိုင်သွားတဲ့သူမကို လှမ်းထိန်းလိုက်ရာမှာ..ယုယရဲ့ကိုယ်လုံးလေးဟာ မင်းထက်ရဲ့ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးထဲမှာရောက်သွားပါတယ်..အို..ကိုကြီး...ကန်တော့..သမီးအရမ်းနာလို့ပါ....ယုရကမျက်နှာကို
မင်းထက်ရင်ဘတ်မှာဖွတ်ထားတာကြောင့်...ယုယကျနပ်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်တာကို သူ မသိလိုက်ရပါ...ယုယရဲ့ ရင်ဘတ်ရှေ့က သားမြတ်လေးတွေကလည်း မင်းထက်ရင်ဘတ်ကိုပြားနေအောင်ကပ်ထားတာကြောင့်...မင်းထက်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေကလည်းဆူညံသွားတော့တာပါ....သမီးခြေထောက်မထောက်နိုင်တော့ဘူးကိုကြီး..ဒီအချိန်မှာ ညကလည်းမှောင်စပြုလာတာကြောင့်...ကိုကြီး..ရှေ့နားမှာ သမီးရဲ့ဘဏ်ကသူငယ်ချင်းအိမ်ရှိတယ်..အဲ့မှာဆေးဝင်လိမ်းရအောင်...သမီးလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ ဟိုလေ....ကိုကြီးသမီးကို ပွေ့ခေါ်ပါလားဟင်...ယုယကအမှန်တော့အကောင်းကြီးပါ...ဒါကို ကိုကြီးကတုံးတာကြောင့်မသိတာလေ..စိတ်တွေအ၇မ်းပူနေတာ...သူမဒကောက်ကွေးကနေကိုကြီးကမပြီးတစ်ဖက်ကသူမချိုင်းကြားကနေပွေ့လိုက်ပါတယ်....ယုယစိတ်ထဲက အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေတာပေါ့..မင်းထက်ကတော့
သူမတင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ကိုင်ထားရတာရယ်..သူမချိုင်းကနေပွေ့ထားရတာရယ်ကြောင့် သူ့စိတ်ထဲကလည်းယုယနွယ်က
သူ့အဒေါ်မိုးမြတ်နွယ်နဲ့ချွတ်စွတ်တူနေတာရယ်ကြောင့် သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း မိုးမြတ်နွယ်ကိုပွေ့ထားသလိုခံစားရပြီး.....မိန်းမအတွေ့အကြုံလည်းမရှိတာကြောင့် သူ့ပုဆိုးအောက်က သူ့မွေးရာပါညီလေးကလည်း တင်းမာလာပါတယ်...ပြီးတော့
ယုယနွယ်ရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးကလည်းသူ့နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်နေပြီး လက်တစ်ဖက်ကသူ့ကလည်ပင်းကို ဆွဲခိုထားတာကြောင့် ယုယနွယ်ရဲ့မျက်နှာကလည်းသူနဲ့ထိလိမတတ်ဖြစ်နေပြီး ယုယနွယ်ရဲ့နှာတံစင်းစင်းလေးထဲက ၀င်လေထွက်လေပါသူ့မျက်နှာပေါ်ဖြတ်သန်းနေတာပါ..
သီသီရေ သီသီ..သီသီစိုးက အိမ်ရှေ့မှခေါ်သံကြောင့် လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်.....ယုယနွယ်ရဲ့အသံပဲ...ဒီသူငယ်ချင်းမအကူအညီတောင်းထားတာကြောင့်...သူမစောင့်နေတာကြာပါပြီ...ကိုမင်းထက်ကြီးက ယုယနွယ်ကိုပွေ့လာတာပဲ...ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ...ဟွန်း..ကောင်မယွကိုယွတယ်....လင်လိုချင်တာများ...ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအကူအညီပါယူရတယ်လို့...ယုယနင်ဘာဖြစ်လာတာလဲဟာ....ဟိုလေငါ့ခြေထောက်ခေါက်သွားလို့ဟ...ကိုကြီးမင်းထက်ပါလာလို့တာပေါ့...အင်း...နင်အိမ်ပြန်နိုင်ပါ့မလား။...ဆေးလေးတော့လူးထားဦးလေ..နေဦးဟဲ့.သူငယ်ချင်းရဲ့....ငါ့ဆိုင်ကယ်ကလည်း ငါ့အဖေနဲ့ငါ့အမေအပြင်ထွက်သွားလို့စီးသွားတယ်....အဲ့ဒါနင်နည်းနည်းစောင့်ပေးဦး...ကိုကြီးမင်းထက်လည်းဆိုင်ပိတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အားတယ်မဟုတ်လား.....ကျွန်မလမ်းထိပ်မှာလေ...စာအုပ်လေးငှားထားတာ.ရက်လွန်နေလို့သွားအပ်လိုက်ဦးမယ်။...ဆေးလိမ်းရင်းစောင့်နေကြီဦး...ကိုကြီးမင်းထက်..အနောက်ခန်းကစင်ပေါ်မှာလေ ပရုပ်ဆီဘူးရှိတယ်.....သြော်..ဟုတ်ကဲ့ညီမလေး...မင်းထက်အနောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာ သီသီစိုးကယုယနွယ်ကို....ကဲမိန်းမနင့်ကိုကြီးနဲ့မီးစင်ကြည့်ကပေတော့...မိန်းမနော်...လင်လိုချင်တာများပြောကိုမပြောချင်ပါဘူး..ခ်ခ်...တကတည်း...အရပ်ကူပါလူဝိုင်းပါနဲ့...ရှုးတိုးတိုး...ယုယနွယ်က နှုတ်ခမ်းရှေ့မှာ လက်ညိုးလေးထောင်ပြလိုက်တယ်...သူမမျက်နှာကပြုံးစိစိနဲ့..သူ့သူငယ်ချင်းကို...နင်မိနစ်(၂၀)လောက်နေရင်ဖုန်းဆက်လိုက်နော်....ငါ့အိမ်ကို..အေးပါဟဲ...တကတည်းမှာနေလုိုက်တာ....ထိုအချိန်မှာမင်းထက်ကပရုပ်ဆီဘူးကိုင်ပြီးထွက်လာတာကြောင့်.....ကဲကိုကြီးမင်းထက်...ကျွန်မစာအုပ်သွားအပ်လိုက်ဦးမယ်..နေခဲ့ကြဦး....သီသီစိုး စာအုပ်အပ်ဖို့ထွက်သွားတာနဲ့....ကဲ..ကလေး....ပရုပ်ဆီလူးရအောင်.....ယုယနွယ်က ပရုပ်ဆီလူးရအောင် သူမ ထမိန်စကပ်လေးကိုအနည်းငယ်လှန်လိုက်တော့သလုံးသားလေးတွေပေါ်လာပါတယ်....ဖြူအုပြီး ဆင်စွယ်နှစ်ချောင်းလိုဖြောင့်စင်းနေတဲ့သလုံးသားလေးတွေကြောင့်...မင်းထက်ရင်တွေခုန်သွားပါတယ်...ယုယနွယ်ကလည်းခုနကတမင်သက်သက်ကျောက်ခဲကိုဝင်တိုက်ရာမှာပီပြင်အောင်အားထည့်လိုက်တာကြောင့်
အိမ်ထဲမှ သမီးဖြစ်သူ အသံကြောင့်ဒေါ်သီတာဒေါသနည်းနည်းထွက်သွားသည်..ယွချင်တိုင်းယွနေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဒေါသထွက်သွားသည်..သမီးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သီသီစိုး၏ ဖုန်းဆက်သတင်းပေးမှုကြောင့်ရပ်ကွက်လူကြီးများခေါ်ကာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်.....သီသီစိုးကတော့မကြည့်ရဲဟုဆိုကာ ရှောင်ထွက်သွားသည်။။ကိုကြီးမပြီးသေးဘူးလား....ပြီးပါပြီကလေးရဲ့...သူ့သမီး၏ တအင်းအင်း..တစ်အအအသံများကြောင့်ဒေါသထွက်သွားသည်.....ဟဲ့..ယုယနွယ်ထွက်လာခဲ့စမ်း....သမီးမိုက်...မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သီတာအသံကြောင့် ယုယနွယ်စိတ်ထဲက၀မ်းသာသွားသည်....သို့သော်မျက်နှာကထိတ်လန့်ဟန်ဆောင်ပြီး....အို...အိမ်ကလူတွေလိုက်လာပြီ...ဘာမှန်းမသိဘူး....ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကြီး....အဲ့ဒါဆိုကလေး....ကိုကြီးခဏရှောင်နေလိုက်မယ်...ကိုကြီးကအမြန်ထရပ်ပြီး...အနောက်ဖက်သို့ပြေးရန်ပြင်လိုက်သည်...ဒီအချိန်မှာရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတာယုယနွယ်သိတာပေါ့...ယုယနွယ်လည်း..မတ်တပ်ထလိုက်သည်..ခြေထောက်ဒဏ်ရာကြောင့်..ယိုင်သွားဟန်ဆောင်ပြီး...
ဖမ်းအထိန်းမှာ..သူမတို့(၂)ယောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုထပ်ရက်ကြီးကျသွားသည်...ထိုအချိန်မှာပင်အိမ်တံခါးကလည်းဝုန်းကနဲပွင့်သွားပြီး..ရပ်ကွက်လူကြီးများနှင့် သူမအထေ၊အမေ၊ဒေါ်လေးတို့ဝင်လာကြသည်...အမေကတော့ မျက်နှာကိုလွဲသွားသည်....ကိုကြီးခန္ဓာကိုယ်ကို သူမပေါ်ထပ်ရက်ကြိးမဟုတ်လား....ရပ်ကွက်လူကြိးများကတော့..ကဲမောင်မင်းထက်..အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ...ဒီကောင်မလေးကို မင်းမိသားဖသားပီပီတောင်းရမ်းလက်ထပ်ပါ...ငြင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့...ဟိုဟိုလေ...ဟိုဟာတွေဒီဟာတွေလုပ်မနေနဲ့....မင်းထက်ငြင်းဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒေါ်သီတာက၀င်ပြောလိုက်သလို...ရပ်ကွက်လူကြီးများကလည်းတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဝင်ပြော...ယုယနွယ်ကလည်းဘာမှရှင်းမပြပဲ
ငိုနေတာကြောင့် သူဘာမှရှင်းပြခွင့်မကြုံလိုက်ပါဘူး.......ဒီလိုနဲ့ပဲ...မင်းထက်ဟာ သူအရမ်းချစ်တဲ့မိုးမြတ်နွယ်တူမ မိုးမြတ်နွယ်နဲ့အရမ်းတူတဲ့ ယုယနွယ်ကို လက်ထပ်ဖို့သဘောတူလိုက်ရတာပေါ့..မင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲကကမင်္ဂလာခန်းမမှာပဲဆောင်ပါတယ်....ယုယနွယ်အဖို့လည်းအပျော်ကြီးပျော်တာပေါ့လေ..သူမဒေါ်လေးသိပ်ချစ်ခဲ့သလို..သူမလည်းသိပ်ချစ်တဲ့
မင်းထက်ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သူ့အနားမှာ နေခွင့်ရလိုက်လို့ပေါ့...
မင်းခန့်က မင်္ဂလာဦး ကုတင်ပေါ်ရောက်ရှိသည်အထိ..ခုချိန်ထိသူနားမလည်သေး...ယုယနွယ်ကို...သူကားတစ်ကောင်ကြွက်ဖြစ်သောကြောင့် ယုယနွယ်တို့အိမ်ကိုဆံထုံးနောက်ယောင်ပါခဲ့သည်...ယုယနွယ်နေသောအခန်းတွင်မင်္ဂလာဦးအခန်းအဖြစ်ပြင်ထားသည်...ဒီအခန်းကားယခင်ကမိုးမြတ်နွယ်နေခဲ့သော အခန်းဟုသိရသည်.....မိုးမြတ်နွယ်နှင့်ယုယနွယ်ကားတကယ်ကိုတူလှသည်....ယုယနွယ်ကားသူ့အဒေါ်ကိုတော်တော်ချစ်ဟန်တူသည်...စားပွဲပေါ်မှာမိုးမြတ်နွယ်ပုံကိုတင်ထားသည်...ယုယနွယ်ကား အ၀တ်အစားများကိုလဲနေပါတယ်....တစ်နေကုန်ဧည့်ခံပွဲမှာ ဆိုတော့ ပင်ပန်းခဲ့တာလည်းပါပါတယ်...ကိုကြီး..သမီးကိုစိတ်ဆိုးလားဟင်...ယုယနွယ်အမေးကြောင့် သူတစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်....ကိုကြီးကို သမီးကဟိုတုန်းကတည်းကချစ်နေတာ...အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုကြီးနဲ့ဝေးရမှာစိုးလို့အဲ့လိုကြံမိတာပါ...သမီးဒေါ်လေးရဲ့ဒိုင်ယာရီကိုဖတ်ဖတ်မိရင် ကိုကြီးနဲ့ဒေါ်လေးအဖြစ်ကိုတွေးပြီးကိုကြီးကိုသနားနေခဲ့တာပါ...ကိုကြီးကြည့်ပါဦး..သမီးကို ဒေါ်လေးနဲ့တူလားလို့...ယုယနွယ်ကမျက်နှာလေးကိုမော့ရင်းသူ့ကိုမေးနေတာပါ..ကောင်မလေးက သူ့အဒေါ်နဲ့တော်တော်ပေမဲ့သတ္တိကတော့သူ့အဒေါ်ထက်ကောင်းသည်ဆိုသည်ကိုလက်တွေ့ပြသွားခဲ့ပြီ..အိုကလေးရယ်...ယုယနွယ်ရဲ့မျက်နှာချောချောလေးကို အနမ်းမိုးတွေရွာလိုက်ပါတယ်...ယုယနွယ်ရဲကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဖက်ပြိးတော့ပေါ့...အိုကိုကြီးရယ်....အသက်ရှုကျပ်လှပြီ..လွှတ်ပါအုံး...ယုအရိုးတွေကျေတော့မယ်...ယုယနွယ်က ရှက်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်...မီးမှိတ်လိုက်တော့မယ်နော်......အို....ကိုကြီးမီးခလုပ်ကိုချောက်ခနဲပိတ်ပြီး ယုရဲ့အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ကိုကြီးကဖြုတ်လိုက်ပါတယ်..ယုရဲ့သားမြတ်လေးတစ်စုံက လင်းပြပြရနေတဲ့အလင်းရောင်မှာမြင်နေရဆဲပါ..ကိုကြီးက ယုယရဲ့သားမြတ်ထိပ်လေးတွေကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ငုံပြီးစုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ယုယတစ်ကိုယ်လုံး လေထဲမျှောလွင့်နေသလိုပါ...ကိုကြီးရဲ့လက်ကလည်းယုယရဲ့
ပေါင်ကြားက ရတနာရွှေကြုပ်လေးကို ခပ်ရွရွလေးပွတ်ပေးနေတော့ ယုယအသက်ရှုမ၀သလိုဖြစ်လာပြီး နားထင်ကချွေးစေးလေးတွေပျံလာပါတယ်...ကိုကြီးရယ်...ယုယမနေနိုင်တော့ဘူး...ယုယကိုလုပ်ပေးပါတော့..ယုယနွယ်ရဲ့ပါးစပ်ကတိုးတိုးလေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာ တော့ မင်းထက်ရဲ့ဒုတ်ကြီးကမင်းထက်ရဲ့ပေါင်ကြားမှာတန်းနေပါပြီ...ကိုကြီးကယုယနွယ်ရဲ့
ရွှေကြုပ်လေးအ၀မှာတေ့ပြီး အဲ့ဒုတ်ကြီးကို ခပ်ဖိဖိလေးတွန်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ ယုယတစ်ကိုယ်လုံးလေထဲမြောက်သွားသလိုခံစားရပြီး.ဇောချွေးလေးတွေထွက်လာပါတယ်....ကိုကြီးရဲ့ဒုတ်ကြီးကယုယရဲ့ရွှေကြုပ်ထဲကို
အဆုံးထိစိုက်ဝင်ခါနီးမှာ ယုယရဲ့အမြေးပါးလေးကို ထိုးခွဲသွားတာကြောင့်ယုယအနည်းငယ်တော့နာသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။။ယုယက ကိုကြီးရဲ့ခါးပေါ်ကို သူမရဲ့ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကိုလှမ်းချိတ်လိုက်ပြီး ကိုကြီးရဲ့ခါးကိုလှမ်းဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့..ကိုကြီးကယုယရဲ့ရွှေကြုတ်ထဲကို သူ့ဒုတ်ကြိးကိုထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်....မိနစ်(၂၀)ကျော်လောက် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ယုယရဲ့ရွှေကြုပ်လေးကကျပ်နေတာ ကြောင့်
ကိုကြီးဒုတ်ကိုညစ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီး ကိုကြီးလည်း တဟင်းဟင်းတဟဲဟဲဖြစ်နေသလို..ယုယမှာလည်းကိုကြီးရဲ့ဒုတ်ကြီးက သူမရွှေကြုပ်လေးကို ထုတ်သွင်းလုပ်တဲ့အရှိန်ကြောင့် အရည်ကြည်လေးတွေထွက်လာပါတယ်.....နောက်ထပ်(၁၀)မိနစ်လောက်အရောက်မှာ
ယုယအထဲကနေ ဆီးသွားချင်သလိုလို...ငိုချင်သလိုလို ရင်ထဲကတလှပ်လှပ်ဖြစ်လာသလို...ကိုကြီးကသူ့ဒုတ်ကြီးကို အခါ(၃၀)လောက်ခပ်မြန်မြန်ထုတ်သွင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ယုယလေဟာနယ်ထဲရောက်သလို ခေါင်းထဲမှာလက်ခနဲဖြစ်သွားပြီး သူမရွှေကြုပ်လေးထဲကနေ အရည်တွေစီးကျသွားသလို..ကိုကြီးရဲ့ဒုတ်ထဲကနေ အရည်တွေကလည်း သူမရွှေကြုပ်လေးနံရံကို ပန်းထုတ်လိုက်တာကို တပ်မက်စွာ ရွှေကြုပ်လေးကစုပ်ယူနေပါတော့တယ်...ကိုကြီးက ယုယကို နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပြီး အနမ်းချင်းဖလှယ်တာကိုယုယကြည်ဖြူစွာခံယူနေပါတယ်...သိပ်ချစ်တာပဲ..ယုယရယ်...သြော်...ကိုကြီးရယ်....
ကိုမင်းထက်..ကိုမင်းထက်...ခေါ်သံလိုလိုကြားတာကြောင့် မင်းထက်မျက်လုံးတွေပွင့်လာပါတယ်...မိုးမြတ်နွယ်ပါလား...အခန်းထောင့်မှာမိုးမြတ်နွယ်က ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးနှင့်....ကိုမင်းထက်..မိုးတူမလေးကိုဂရုစိုက်လိုက်ပါနော်....တူမလေးကလေ ကိုမင်းထက်ကိုအရမ်းချစ်တာ...မိုးကဆုံးသွားကတည်းကလေတူမလေးရဲ့အခန်းထဲမှာပဲနေတာ.....ကိုမင်းထက်ကိုလေ..မိုးရဲ့ဒိုင်ယာရီတွေကို တူမလေးကဖတ်ပြီးကတည်းကချစ်နေခဲ့တာ...မင်းထက်ဘာပြောရမှန်းမသိ...ကြောင်အကြီးဖြစ်နေသည်....မိုးကလေကိုမင်းထက်ကိုစိတ်မချတဲ့စိတ်နဲ့ မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘုံဘ၀ကိုရောက်နေတာပါ ကိုမင်းထက်ရယ်..အခုတော့ကျွန်မစိတ်ချပြီ.ကိုမင်းထက်ကိုချစ်တဲ့ မိုးရဲ့တူမလေးကို ကိုမင်းထက်လက်ထပ်လိုက်ပြီ..ပြီးတော့မိုးအချစ်ဆုံးကိုမင်းထက်ကိုမိုးမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ တူမလေးက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တာကိုလည်းကျေနပ်မိတယ်...မိုးလေကိုမင်းထက်တို့ဆီပြန်လာချင်တယ်...ခွင့်ပြုပါနော်ကိုမင်းထက်.....မင်းထက်နှုတ်ခမ်းတွေ တစ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာသည်....လာခဲ့ပါမိုးရယ်...ခွင့်ပြုပါတယ်။။၀မ်းသာလိုက်တာ..အကိုရယ်...မိုးသွားတော့မယ်နော်....မိုး...မိုး...မိုးမြတ်နွယ်ပျောက်သွားသဖြင့် မင်းထက်ခေါ်မိနေသည်...ဟူး...မင်းထက်ရေတစ်ခွက်ထသောက်လိုက်သည်......ယုယနွယ်ကားမင်းထက်ရေထသောက်နေသည်ကို တစ်ရေးနိုးလာတော့လှမ်းမြင်သည်...မင်းထက်ကားအိမ်မက်မက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်...မိုးကသူတို့ဆီပြန်လာချင်သည်ဆိုတော့....အင်း...ထိုအချိန်ယုယနွယ်ကားသူ့ခါးကိုလာဖက်သည်...ကိုကြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့..သူကားယုယဘက်လှည့်ပြီး..အိမ်မက်မက်လို့ပါယုယရယ်....မိုးကိုအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့တယ်...ကိုကြီးတို့ဆီပြန်လာချင်တယ်တဲ့...အဲ့တော့လေ...မိုးပြန်လာလို့ရအောင်...ကိုကြီးကယုယကို သမီးလေးမွေးလို့ရအောင်...အို..ကိုကြီး..ယုယကားသူ့ရင်ခွင်တွင်မျက်နှာလေးဖွတ်ကာရှက်နေသည်....ပြီးတော့မိုးကပြောတယ်...ယုယကကိုကြီးကိုချစ်နေတာကြာပြီဆိုလား.....ဟင်း..ကိုကြီးနော်...သိသားနဲ့....ဒေါ်လေးကလေယုယအိမ်မက်ထဲအမြဲလာတယ်..သိလားကိုကြီး....ကိုကြီးကိုလေသူထားခဲ့ရတဲ့အတွက် သူဝမ်းနည်းနေတာ..သူသတ္တိမရှိလို့..ကိုကြီးကို သူ့ရာဇ၀င်ထဲမှာ ချန်ထားခဲ့ရပေမဲ့..ယုယကတော့လေကိုကြီးကို ယုယရဲ့ဘ၀ရာဇ၀င်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ ချန်မထားခဲ့ဘူး....သိလား....အိုယုယရယ်...သူကားစိတ်မထိန်းနိုင်တော့..ယုယကိုယ်လုံးလေးကိုသူပွေ့ကာ ကုတင်ပေါ်ကို ထပ်ရက်လှဲချလိုက်သည်...အို..ကိုကြီး..သူသိပ်ဆိုး....ခ်ခ်.ယုယရဲ့ရှက်ရယ်ရယ်သံလေးတွေက အခန်းထဲလွင့်ပျံသွားသည်....ကိုကြီးသူမကိုဘာလုပ်မည်ကိုသိနေသည်မဟုတ်ပါလားကွယ်...ကိုကြီးရဲ့ဒုတ်ကြီးက ယုယရဲ့ရွှေကြုပ်လေးထဲကို ထုတ်သွင်းလုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်ပါလား.....ဒါမှလည်း ဒေါ်လေးကပြန်လာလို့ရမှာလေ...အို..ကွယ်ရှက်လိုက်တာနော်....ကိုကြီးကယုယရဲ့ရွှေကြုပ်လေးထဲကို အသွင်းအထုတ်လုပ်နေချိန်မှာ ယုယရဲ့နှုတ်ခမ်းထဲကနေ အင်းအင်းဟင်းဟင်းဆိုတဲ့... တိုးတိုးသံလေးတွေကလည်း အခန်းထဲမှာ ငြင်သာစွာထွက်ပေါ်နေပါတယ်..နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုကြီးရဲ့ဒုတ်ကအချစ်ရည်တွေနဲ့ယုယရဲ့ရွှေကြူပ်ကမေတ္တာရည်တွေကပေါင်းစပ်သွားပါတော့တယ်..နောက်တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ယုယမှာကိုယ်ဝန်ရှိလာပါတယ်....တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ယုယဟာ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်....သမီးလေးဟာမင်းထက်နဲ့ယုယကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်..အဘိုးအဘွားတွေကလည်းအရမ်းချစ်ကြတာပေါ့..သမီးလေးစကားပြောတတ်၊လမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့..သမီးကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲလို့
အဘိုးအဘွားတွေကမေးကြတဲ့အခါမှာ..သမီးကြီးလာရင်ကျောင်းဆရာမလုပ်မယ်လို့ပြောတတ်တာရယ်...ရပ်ကွက်ရေသွင်းမြောင်းထိပ်ကတံတားလေးကို သူ့အဖေမင်းထက်ကို ခဏခဏခေါ်သွားဖို့ပူဆာတတ်တာလေးရယ်ပေါ့လေ..#########ပြီးပါပြီ####### Posted by